Soomaalida ku nool Sweden oo loo diiday iney lacag u soo diraan Soomaaliya – Somali Top News
Soomaalida ku nool Sweden oo loo diiday iney lacag u soo diraan Soomaaliya
Bilihii ugu dambeeyay ayuu bangiga Swedbank xidhay koontooyin ay leeyihiin dhowr xawaaladood oo Soomaaliya lacag u dira. Sababta waxaa lagu sheegay inaan la damaanad qaadi karin in lacagaha laga diro Sweden aysan galin gacanta ururada argagaxisda ah.
Waxaa sidaas lagu sheegay warqado loo diray shirkadaha xawaaladaha ee laga xiray koontooyinkan.
Ibrahim Omar ayaa madax ka ah xawaalad dhowaan la xidhay ayaa sheegay inay wanaagsantahay in laga hortago maalgalinta ururada argagisada ah, laakiin aysan aheyn Wixii arintan kusoo kordha dib ayaan kasoo galin doonaa.
← Soomaaliya iyo Masar oo kala saxiixday heshiis dhanka amniga ah
Wasiirada Haweenka oo dooneysa in si shaqsiyan ah ula wareegto Guriga Hooyooinka Soomaaliyeed →
Mid kamid ah madaxda maamul Goboleedyada dalka oo ka badbaaday weerarkii Nairobi
Ra’isul Wasaare Kheyre oo gaaray magaalada Jowhar